Waxaa goor dhawayd saxafada la hadlay Wasiiro ka tirsan Puntland iyo Jubaland oo jawaab kulul siiyay Wasiir Dube | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waxaa goor dhawayd saxafada la hadlay Wasiiro ka tirsan Puntland iyo Jubaland...
Waxaa goor dhawayd saxafada la hadlay Wasiiro ka tirsan Puntland iyo Jubaland oo jawaab kulul siiyay Wasiir Dube
Waxaa goor dhawayd saxafada la hadlay Wasiiro ka tirsan Puntland iyo Jubaland oo jawaab kulul siiyay Wasiir Dube oo ku eedeeyay maamuladaas in ay Mas’uul ka yihiin burburka shirk,ii manta lagu kala dareeray.
Labada maamul ee Puntland iyo Jubaland, waxay beeniyeen eedaynta dowladda Federaalka oo la xariirtay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay diideen in dalku doorasho aado, islamarkaana ay fashiliyeen shirkii Muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta Dawladd goboleedka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi ( Tima-cadde ) ayaa sheegay in aysan jirin Shir fashilmay oo Puntland iyo Jubbaland ogyihiin, waxa uuna tilmaamay in maanta shirku uu ku soo dhamaaday in la isusoo nasto oo dib la iskugu soo laabto markale
Previous articleCilmi baarayaal ku sugan dalka Britainoo oo shegay in dadka uu ku dhaco fayraska Corona ay u badan tahay inuu ku dhaco xanuunka maskaxda.
Next articleDowlada Federalka ayaa ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay soo hordhigeen shuruudo aan la aqbali karin.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhibsatay, kana jawaabtay war-saxaafadeed kasoo baxay ururka gabdhaha Soomaaliyeed ee LeadNow! (Hoggami Hadda), oo ku saabsana burburkii ku yimid wada-hadallada Afisyoone...